QM oo cambaareysay qaraxii ka dhacay Xarunta Gobolka Banaadir - Hoyga Wararka
Home Somali News	QM oo cambaareysay qaraxii ka dhacay Xarunta Gobolka Banaadir
Ergeyga Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabbilsan Soomaaliya, James Swan, ayaa si weyn u cambaaeeyay ciddii ka dambeysay qaraxii ka dhacay xarunta Maamulka Gobolka Banaadir.
War Saxaafadeed kasoo baxay Xafiiska UNSOM ee Muqdisha ayaa lagu sheegay in ay Qaramada midoobay aad ugu xun tahay wixii halkaasi ka dhacay, Jimciyadda quruumaha ka dhaxaysana ay Garab taagan tahay Dadka iyo Dowladda Soomaaliyeed.
“Waxaan cambaareynayaa weerarka waxashnimada ah ee ay soo maleegeen kuwo aan qaddarineyn nolosha Bini’aadmiga ee bartilmaameedsanaya Dad ka shaqeynaya wanaagga nolosha Walaalahooda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Gobolka Banaadir” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Xafiiska James Swan.
James Swan, oo sidoo kale ah Madaxa howlgalka Qaramada midoobay ee Soomaaliya (UNSOM), ayaa tacsi u diray Qoysaska iyo asxaabta dhibanayaasha, wuxuuna kuwa dhaawaca qaba u rajeeyay caafimaad deg-deg ah.
Dhaawaca Yariisow oo turkiga loo qaadayo ?
Jubbaland oo qabatay Ajaanib ka tirsanaa Al-Shabaab
Muqdisho Gudoomiye ku xigeenka Arimaha Bulshada aya ka...
Trump ayaa khudbad u jeediyay qaran kadib weerarkii...
DEG DEG Dawlada Fadaraalka oo magacowday guddi kadib...
Guardiola ayaa sheegay in Manchester City aysan awoodi...
Madaxweynihii Maamulka Oromada Itoobiya oo la Magacaabey Wasiir?
Milatariga Maraykanka oo joojiyay $ 450m Oo Lagu...